Hab cusub oo lagu tarxiileyo dhallaanka kelinimada ku yimaada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wiil magan-gelyo doon ah oo daaqadda taagan dibaddana eegaya. sawir: Sawirle: Fredrik Sandberg/TT
Hab cusub oo lagu tarxiileyo dhallaanka kelinimada ku yimaada
La cusbooneeyay måndag 26 september 2016 kl 11.16
La daabacay måndag 26 september 2016 kl 08.31
Boqolaal dhallaan ah oo dalka ku yimid keli-nimo ayaa dalabkoodii magan-gelyo doon ku heley diidmo xitaa haddii aan dhallaanka dib loogu celin karin waddammadii iyadoo aan loo heyn goobtii ey kaga noolaan lahaayeen.
Hayadda socdaalka ayaa wax ka badashay habkeedii dhabba-tuska ee dhallaanka aan qaan-gaarin horay loogu siin jiray sharciga deggenaansho. Iyadoona si middaa looga baxsado lala sugi doono tarxiilka inta dhallaanku ka qaan-gaareyaan eyna buuxineyaan da’da 18.
Mohammad Nabavi ayaa lagu war-geliyey in dalkiisii hooyo dib loogu tarxilli doono kolka uu 18-jirsado.
– Muhiimadda ka dambeeysa ayaa ah in Sweden la igu hayo inta aan ka qaan-gaarayo, dabadeed la ii tarxiilo Afgaanistaan, sida uu sheegay isaga oo gacanta ku haya go’aankii wakaaladda socdaalka.
Go’aanka wakaaladda socdaalka ayuu helay muddo iminka dhowr toddobaad laga joogo, isla-markaana uu 18-jirsanayo jimcada foodda innagu soo haysa.
Sida uu qabo xeerka magangelya-doonka wuxuu mamnuucayaa in ilmo aan qaan-gaar ahayn lagu sameeyo tarxiil, haddii aan loo diyaarin goobtii uu ku noolaan lahaa, waddanka Afgaanistaaan-na adeeg noocaasi ah kama uu jiro. Waxaa sidoo kale jirta in aanay shuruud noocaasi ah jirin kol haddii uu qofku qaan-gaar yahay. Sidaa daraadeed ayay shuruudda noocaasi ah ee Maxammad meesha ka bixi doontaa jimcada foodda innagu soo haysa. Sababtaa daraadeedna dib loogu tarxiili doonaa magaalada Kaabuul ee caasimadda dalka Afgaanistaan , sida ay wakaaladda socdaalku ku macneeysay go’aankeeda.
Sida ay sheegtay wakaaladda socdaalku inuu nidaamkani saameeyay boqolaal ka mid ah dhallaanka keli-nimada dalka ku yimidey, gaar ahaan kuwa ka soo socdaaley waddanka Afgaanistaan. Kuwaasina oo iminka inta aaney qaan-gaarin la siineyo go’aan diidmo ah, hase yeeshee lagu fulin doono tarxiilka kolka ey qaan-gaaraan.. Waa tiro dhowr kun kor u gaari doonta sannadaha foodda innagu soo haya.
Haddiise loo raaci lahaa dhallaankaasi nidaamkii hore ee dhabba-tuska wakaaladda socdaalka ey badankood dalka ku heli lahaayeen sharci deggenaansho.
Qoraal laga heley hayadda socdaalka, kuna taariikheey-san 7-dii bishii juun ayaa qalinka lagu duugey dhaba-tuskan cusub. Qoraalka ayaa qeexaya in dhallaanka da’doodu tahay 16, 17 ee aaney jirin sababo qaxooti-nimo lagu siiyo, isla-markaana aan dib loogu celin karin waddammadii ey ka yimaadeen la siiyo sharciyo ku meel-gaar ah dabadeedna dib loo tarxiilo kolka ey gaaraan da’da 18 sannadood.
Haddii ey da’doodu ka sarreeyso 17 sannadood iyo 5 bilood ayaa laga gaarin go’aan diidmo ah, hase yeeshee dib loo dhigo tarxiilka inta ey ka qaan-gaareyaan.
Waana mid uu xeerka ajaaniibtu ogol yahay, sida uu sheegay Kjell-Terje Torvik:
– Haddii midda hor-taagan go’aanka tarxiilku yahay mid ay sabab u tahay muddo yar, markaa looma baahna in go’aan deggenaansho la gaaro, sida uu sheegay.
Mohammad Nabavi ayaa abiil ka qaatay go’aanka diidmada ee wakaaladda socdaalka, iyadoona iminka ay u taalo siday go’aan uga gaari lahayd arrinkaa maxkamadda socdaalku. Maxammad ayay xumaatay hurddadiisii wixii go’aanka diidmada ah ka dambeeyay, awoodna aan u hayn uu xoogga ku saaro tacliinta.
Maxammad ayay xaaladdiisu ku sugan tahay rajo-beel. Maxammad oo u dhashay qowmiyad aamin-san mad-habta shiicada ee laga tirada badan yahay ay sheegtay hayadda caalamiga ee UNHCR in dalka Afgaanistaan loogu geeysto faqooq iyo handadaad. Maxammad ayaa qaxooti-nimo ugu dhashay dalka Iiraan oo aan weligii arag dalkiisa hooyo ee Afgaanistaan intii aannu Sweden u iman magan-gelyo doon. Kuma uu laha dalkaasi wax qaraabo ah, meel uu ka dego iyo shaqo midna.
– Dadkuse waxay u haystaan iney hayadaha Sweden u macaamiltamaan hab bani aadmi-nimo ku dheehan tahay, sida uu sheegay Maxammad isaga oo neef tuuraya.